သိသင့်တယ်ထင်လို့ပါ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ညား . . . . . ဖတ်ကြည့်ပါ ကျွန်မတောင်အခုမှသိတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သိသင့်တယ်ထင်လို့ပါ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ညား . . . . . ဖတ်ကြည့်ပါ ကျွန်မတောင်အခုမှသိတယ်။
သိသင့်တယ်ထင်လို့ပါ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ညား . . . . . ဖတ်ကြည့်ပါ ကျွန်မတောင်အခုမှသိတယ်။
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 18, 2010 in News | 19 comments
source:(မူရင်းက ဒီမှာ) http://solomonn.0fees.net/wordpress/?page_id=42
မေး ။ ။ Wanna —ကျွန်တော်မေးခွန်းလေး
နည်းနည်းလောက်မေးချင်ပါတယ်…အခြားဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ
တွင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိနိုင်သောကြောင့် အပယ်သွားနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ်..
အခြားဘာသာဝင်များသည် နဂိုကတည်းက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ကို
ယုံကြည်ခြင်းမရှိသဖြင့် … မယုံကြည်ခြင်းကြောင်ဖြစ်ပေါ်သော အကျိုးကို
ခံစားရခြင်း မရှိနိုင် ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာက Religion လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာတွေနဲ့
မရောထွေးလိုက်ပါနဲ့ ။ Religion ဆိုတာက ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့
ဆုတောင်းခြင်းကို အခြေခံပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက ကျင့်စဉ်ဆိုတာပါနေတယ်။
ဘယ်သူကျင့်ကျင့် ကျင့်တာနဲ့ ထူးခြားစေတဲ့ ဓမ္မတရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ကို ဖူးရရုံ ၊ နဲ့ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်နေရုံနဲ့
အပယ်လွတ်မယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ပြုတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ၊ အကုသိုလ်
မကောင်းမှုတွေ က သာ ကိုယ့်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားနဲ့
ညီအကိုလဲတော် ၊ ယောက်ဖလဲဖြစ် ၊ ဘုရားကို သက်ရှိထင်ရှားဖူးတွေ့ရတဲ့ ဒေ၀ဒတ်
အ၀ီစိ ကျရတာ ၊ ပုထုဇဉ်တွေထဲမှာ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်သူ ကြည်ညို
တဲ့ အရာမှာ အမြတ်ဆုံးပါလို့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ချီးကျူးရတဲ့ အဇာတသတ်
သူပြုတဲ့ ပိတုကာရက ကံကြောင့် အပယ် လောကန္တရိတ်ငရဲကျရတာတွေ ဟာ သာဓကတွေ
ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အစ္စလာမ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ လူကြီးဖြစ်ဖြစ်၊
ကလေးဖြစ်ဖြစ် ငရုတ်သီးစားရင် စပ်မှာပဲ ၊ သကြားစားရင် ချိုမှာပါပဲ ။
ဒိလိုပဲ ကုသိုလ်လုပ်ရင် ကောင်းမှုအကျိုးခံစားရမယ်။ အကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့
မကောင်းမှုအကျိုးခံရမှာပါပဲ ။ ဒီတော့ ကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲ ၊
မကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာကို သေသေချာချာရှင်းလင်းဟောပြောမှုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက
သီတဂူဆရာတော် ကို အမေရိကန်က ပရောဖက်ဆာကြီးတစ်ဦးက တရားပွဲအပြီးမှာ
အခန်းထဲပင့် ၊ တံခါးကို ပိတ်ပြီး မေးတာ ဒီမေးခွန်းပဲ ။ ကောင်းမှုဆိုတာ
ဘာလဲ ။ မကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲ တဲ့ ။ သူ့ကို ဒါတောင်မသိဘူးလားလို့
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက လှောင်မှာဆိုးလို့ တံခါးပိတ်ပြီးမေးရတာပါတဲ့ ။
ကောင်းမှုဆိုတာ ဗုဒ္ဓအလိုအရ ပုညကြိယာဝတ္ထု (၁၀)ပါး ၊ မကောင်းမှုကတော့
ဒီတော့ နိုင်ငံခြားသာသနာပြုခရီးတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြီးမှာ
တရားကျင့်စဉ်တွေ သင်ပေးမယ်လို့လဲ မရှိပါဘူး။ World Buddhist Summit
(၂၀၀၅) အပြီးမှာ အီရန်က မွတ်စလင်တွေ သင်ခိုင်းတုန်းကလဲ စစ်ကိုင်းမှာ
သင်ပေးတာပါပဲ ။ စိတ်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုချင်ရင်
ဗုဒ္ဓ ဆိုတာကို ဆုံးမသူ (ဆရာ) အဖြစ်သာ နားလည်ရပါတယ်။ တန်ခိုးရှင် ၊
ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာနဲ့ ကွာပါတယ် ။ သူက ဒုက္ခအားလုံးတကယ်ချုပ်တာဟာ
နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်၊ ဒီနိဗ္ဗာန်ကို အသက်ရှင်လျက်မှာပဲ လက်တွေ့ရောက်အောင်ဘယ်လို
သွားလို့ ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြတယ် ။ သွားချင်သူတွေ အတွက် မဂ္ဂင်ဖောင်ဆိုတဲ့
လမ်းစဉ်(၈)ပါးချမှတ်ပေးတယ် ။ ပြီးတော့ သွားတဲ့ ခရီးမှာ ဒီကွေ့မှာ
အတားအဆီးကို ဒီလိုကျော်ပါ ၊ ဟိုကွေ့မှာ ဟိုလိုကျော်ပါ စသည်
စနစ်တကျသင်ကြားပေးတယ်။ လက်ရှိဘ၀မှာတင် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို မြင်ရအောင်
ကျင့်နိုင်ကြတယ်။ ဒီတော့ မဂ္ဂင်ဖောင် ကို ပေးနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ပညာ ရယ်၊
အကျင့်သီလပိုင်းရယ်ကို ယုံကြည်ကြတယ်။ လေးစားကြတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကို
ကိုးကွယ်ကြတယ်။ ဒီမဂ္ဂင်ဖောင်ကို စီးပြီး သွားရာမှာ လှော်ခတ်ဖို့၊
အတားအဆီးတွေမှာ ဗုဒ္ဓပြောသလို ကျော်ဖြတ်ဖို့ကတော့ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုတာတစ်ခု အရေးပါနေတယ်။
ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ယုံနဲ့ ကိစ္စပြီးပြီလို့ လက်ခံသူတွေအတွက် ဒီ အချက်က
နောက်တစ်ခု ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို မယုံကြည်ဘဲ ကျင့်ရင်လဲ
နည်းမှန်အောင်လိုက်ကျင့်လို့ကတော့ တရားထူးကို ရနိုင်ပါတယ်။ သန္ဒိဋ္ဌိကော ၊
ဧဟိပသိကော စတဲ့ တရားဂုဏ်တော်များက ဒီအချက်ကို သက်သေပြုပါတယ်။
အီဂျစ်နိုင်ငံ မာအတ် ဘုရားကျောင်းက ရှေးဟောင်းခရစ်ယာန်ကြီးတွေဟာ
သမထကျင့်စဉ်တွေကို သီဟိုရ်ကနေသင်ပြီး ကျင့်ကြတယ်။
လေလုံအိမ်တွေမှာတောင်နေပြီး သမာဓိကောင်းကောင်းရအောင် ကြိုးစားကြတယ်။
အတော်ဆုံး ဖာသာကြီးတွေ ကမ္ဘာ(၄၀) အထိ ရှေ့ ၊နောက် ဘ၀တွေကို
မြင်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ကြတယ်။ သူတို့ ကမ္ဘာစပုံ၊ ပျက်ပုံ
တွေ့၇တယ်။ သိရတယ်။ကမ္ဘာစဖြစ်လာနေတဲ့ အချိန်မှာ ဖန်ဆင်းရှုင် ဘုရားသခင်ကို
ရှာမတွေ့ကြောင့်တော့ ၀န်ခံရတယ်။ ( The Supreme Science of The BUddha by
Egerton C. Baptist) ဒီစာအုပ်မှာ ပါပါတယ်။သူတို့ ကမ္ဘာ(၄၀) ကို
ကျော်ပြီးမြင်ချင်ကြတယ်။ မရဘူး။ သီဟိုရ်မှာ ပြန်သွားမေးတယ်။
သီဟိုရ်ဆရာတော်တွေက အထောက်အထားနဲ့ ရှင်းပြရတယ်။ ကိလေသာမကင်းလို့ပါတဲ့ ။
သူတို့ ရတဲ့ အဘိဥာဉ်ဟာ အရှင်အနုရုဒ္ဓါ ရဟန္တာမဖြစ်ခင်ရတဲ့
စွမ်းအားဖြစ်နေပြီနော် ။ သိပ်တော်ကြတယ် ။ ဒီမှာကြည့်ရင် ဘုရားရှင်
မရှိတော့ ပေမယ့် သူဟောခဲ့ သင်ကြားခဲ့တာတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာမ၀င်ပဲ ကျင့်လဲ
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာဝနာ ဒီလို အစဉ်နဲ့ လုပ်တယ်။
အနောက်နိုင်ငံသားတွေက ဘာဝနာ ၊သီလ ၊ ဒါန နဲ့ လုပ်တယ်။ ဘာဝနာလုပ်ကြည့်တယ်
သဘောကျပြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ၀င်တယ်။ သီလဆောက်တည်တယ်။ လှူတာကို နောက်ဆုံးမှ
လုပ်တယ်။ ဖားအောက်တောရမှာ တရားကျင့်သွားတဲ့ အမေရိကန် ကျောင်းသားဆိုရင်
ဗုဒ္ဓဘာသာမ၀င်ပါဘူး။ ကျောင်းမှာနေပြီး သမထတွေ လုပ်တယ် နတ်၊ဗြဟ္မာ
၊ပြိတ္တာတွေကို သူ့ဟာသူမြင်ရအောင် ကြိုးစားကျင့်တယ်။ ဈာန် သမာပတ်ကို
ကောင်းကောင်းနိုင်ပြီ၊ (၃၁)ဘုံကို လက်ခံနိုင်ပြီးမှ ဘာသာပြောင်းပါတယ်။
ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးပါဘူး။ ကျင့်မှ ရတယ်။ ကျင့်ရင်
ဘယ်သူမဆို ရနိုင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ကို လုပ်ရင် အားလုံး ကောင်းမှု စံစားရမယ်။
အကုသိုလ်ကို လုပ်ရင် အားလုံး မကောင်းမှု ခံစားရမယ်။ ကံ နဲ့ ကံ၏ အကျိုး ၊
ကံ နဲ့ ၀ဋ်တွေကို ဘယ်သူမှ မလွန်ဆန်နိုင်ကြောင်း ကိုလဲ တော်တော်
ရေးထားပြီးသားမို့ ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ် ။
ပေးထားတဲ့ လင့်ကတော့ ဒီကနေ ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ဖတ်ရတာ တကယ်ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သိသင့်တာပေါ့ဗျာအာလုံးဖတ်သင့်ပါတယ် ခုလိုရှာဖွေတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလူသားအာလုံးနဲ့ဆိုင်တယ် ကျင့်ကြံအားထုတ်သူဘယ်သူမဆို ဘယ်ဘာသာမဆိုလက်တွေ့အကျိုးထူးရနိုင်တယ်ဆိုတာသိသွားတာပေါ့ ဦးဂိုအင်ဂါ တရားစခန်းဆိုယင် ဘာသာခြားများတရားအားထုတ်ချင်လျှင်ရတနာသုံးပါးမရှစ်ခိုးချင်ကမရှစ်ခိုးဘဲနေနိုင်ကြောင်းခွင့်ပြုထားပါသေးတယ်
တော်တော်များများက ကိုယ်လက်ထဲရှိတာ အကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ပြီး မျှတစွာမတွေးတတ်တဲ့သူတွေများပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုးကွယ်နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစား၍ကိုယ်လုပ်မှသာ ကိုယ်ရမည်ဆိုသော
အကောင်းဆုံးတစ်ချက်က တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်များသည် မိမိယုံကြည်မူ့ကိုသာ တည်ဆောက်လိုက်နာပြီး တစ်ပါးသူကို ပုတ်ခတ်ခြင်းကင်းသောဘာသာတရားလည်းဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်း ၍ထောက်ခံလိုက်ကြောင်းပါခင်ဗျာ
ကိုယ်အမြင်ရှင်းသလို သူများလည်းအမြင်ရှင်း အသိဥာဏ်တွေ တိုးတာပေါ့
ကောင်းလိုက်တဲ့စာ.. ဘာသာခြားတွေကို ကောင်းကောင်းပြရတာပေါ့..
တိုတိုရှင်းရှင်းနဲ့ လိုရင်းရောက်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့။
မှန်တာပေါ့နော်။ ကျင့်မှရမှာ မကျင့်ရင် မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေ… ဘယ်နေရာ ဘယ်ဘာသာမှာပဲရှိရှိ တစ်လမ်းထဲသွားကြရတာပါပဲလေ….
တကယ်က ဒီလိုမျိုးပိုစ်တွေ ကို ရှေ့တန်းပို့သင့်ပါတယ်။ တကယ့် ဗုဒ္ဓတရား(ဓမ္မ) ဟာ ဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓတရား(ဓမ္မ)ဆိုသော်လည်း မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ ၏ ၀ိပဿနာတရားစခန်း များတွင် ဘာသာပေါင်းစုံမှ လူအများ လာရောက်တရားအားထုတ်နေကြလေပြီ။ ဆရာကြီးသည် ဗုဒ္ဓတရားတရားအပေါ် လူအများ ဘာသာရေး အဖြစ် နားလည်နေမှုကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဓမ္မဟူသော တတ်နိုင်သမျှအသုံးအနှုန်း ကိုသာ သုံးစွဲပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်တို့ သူကြီးမင်းကတော့ ဗုဒ္ဓတရား(ဓမ္မ) ကို ဘာသာရေးအဖြစ် ယူဆကာ နောက်တန်းသို့ ပို့ထားသည် ဟု ထင်မိပါသည်။ သူလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်း) )
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ “လူမိုက်တို့ သွားရာလမ်း”မှာ ဆရာတော် က လူဆိုးလူမိုက်တို့ သည် နည်းလွှဲးနည်းမှားများကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ဆိုပြီး ကျင်ကြံကြဧ။် တဲ့
ဘယ်လို ပြောရမလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ မသိပါဘူး
အသိတရား တိုးပွားစေခဲ့တဲ့ ပို့ စ်တစ်ခု လို့ ပါ
ခွေးဖြစ်နေလို့ နွားဖြစ်နေလို့ ကောင်းတာလုပ်ပေမယ့်ကောင်းကျိုးမရဘူးမရှိပါ
အ၀ိဇ္ဇာအသိနဲ့ ၀ိဇ္ဇာအသိ ..အသိနှစ်ခုယှဉ်လို့သာ
ဘာသာခြားကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပီးကိုယ်တိုင် တရားဟော၊တရားပြခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာတော် အရှင်အာဒိစ္စရံသီ(ဦးဆန်းလွင်)ရဲ့ ၁၈.၄.၂၀၀၀ မှ ၂၄.၄.၂၀၀၀ နေ့အောင်ပန်းမြို့မှာ အလွတ်အခြေပြု ၀ိပဿနာသင်တန်းဆိုပြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေကိုနာကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ၊ပိုမိုရှင်းလင်းသွားစေပါတယ်…ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပီရယူပါ။လင့်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်….http://www.dhammadownload.com/Ashin-Ardeiksayanthi-(U-San-Lwin)-mp3.htm မျှဝေပေးသော ရင်ငြိမ်းနွေးအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့postလေးပါဘဲ။ ဒီpostလေးကိုဖက်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာ
နိုင်ဖို.လည်းကြိုးစားရမယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဘုရားဟောထားတဲ့ငါးပါးသီလကို တနေ.မှာဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖောက်ဖျက်မိလဲ။ ဘယ်နှစ်ကြိမ် လိုက်နာနိုင်လဲ။ဆိုပြီးတော့ဘဲ ဆင်ခြင်နေရသေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်.. ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်တယ် ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတိုင်း အပ္ပါယ်လေးပါးမကျဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် နိဗာန် သွားမယ့်လမ်းကိုတော့ အထောက်အကူပြုပါတယ် ဥပမာပေါ့ ဘုရားရှင်၊ ဘုရားသားတော်တွေဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီး ရဟန္တာတွေ တရားတော်တွေကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်ရတယ် အဲဒီရတဲ့ကုသိုလ်က နိဗာန်ကိုသွားမယ့် လမ်းကြောင်းကို ဖြောင့်တန်းစေတယ်ပေါ့ဗျာ ကောင်းပါတယ် . ဒါလေးတွေတင်ပေးတာ နောက်ထပ်လည်းတင်ပေးပါဦးနော်.. အားပေးပါတယ်